ဘူတာ B က 2021 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Jun 01, 2022, 12:25ညနေ 2022/06/01 14:13:14 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဗီဒီယို streaming platform B သည် ၎င်းကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၊ လူမႈ ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈဆိုင္ရာ (ESG) အစီရင္ခံစာ ၂၀၂၁”တာ ၀ န်ယူ မှုရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမှု စောင့်ရှောက် မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး စသည့် ကဏ္ in များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုးပမ်း မှုများကို အစီရင်ခံစာ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
လူငယ်များ အွန်လိုင်း တွင် စုရုံး သည့် ယဉ်ကျေးမှု အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ဘူတာ B က သုံးစွဲ သူများအား အရည်အသွေး မြင့်မားသော အကြောင်းအရာ များ ပံ့ပိုးပေး ရန်နှင့် ကျန်းမာသော အသိုင်းအဝိုင်း ဂေဟ ဗေဒ ကိုတည်ဆောက်ရန် အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုသူ ၁၉၈ သန်း သည် ဘူတာ ခ တွင် ဗဟုသုတ အခြေပြု ဗီဒီယို များ ကိုကြည့်ရှု လိမ့်မည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၎င်း၏ ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် လူငယ် များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် နည်းလမ်းဖြင့် အမွေဆက်ခံ နေကြ သည်ဟုဆိုသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် ဘူတာ B ရှိ “ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဝါသနာ ရှင် များ” ၏စုစုပေါင်း ဒေတာ သတ င်းသည် ၁၃၆ သန်း အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
အသက် မပြည့် သေးသော အသုံးပြု သူများအတွက် ဘူတာ B သည် ဆယ်ကျော်သက် မော်ဒယ် များ၊ ဂိမ်း ဆန့်ကျင် စွဲလမ်း မှု စနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး စနစ်များ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဘူတာ B သည် လူငယ် များအတွက် အသိပညာ အလင်း နှစ် အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး သိပ္ပံ လူကြိုက်များ မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သော ဗီဒီယို များ ပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၁ Q4 တွင် site B တွင် လစဉ် တက်ကြွစွာ တင်ပို့ သူ ၃. ၀၄ သန်း ရှိပြီး လစဉ် ဗီဒီယို ၁၀ သန်းကျော် တင်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသော စီးပွားဖြစ် လမ်းကြောင်း များမှတဆင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် uploader ၁. ၃ သန်း ကျော်သည် site B တွင် ဖန်တီးမှု မှတစ်ဆင့် ဝင်ငွေ ရရှိခဲ့သည်။ ပလက် ဖော င်း၏ “မူပိုင်ခွင့် ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်” သည် တင် သူ ၅၀၀, ၀၀၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း မူရင်း ကာတွန်း များကိုပိုမို ကောင်းမွန်စွာ တူးဖော် ရန်နှင့် ထောက်ပံ့ ရန်အတွက် ဘူတာ B သည် မူရင်း ကာတွန်း ကား များနှင့် ကာတွန်း ဝါသနာ ရှင် များအတွက် အဆင့် အမျိုးမျိုး ဖြင့် ပစ်မှတ် ထားသော အထောက်အပံ့ အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များ နှင့်တစ် ဦး ချင်း ဝိသေသလက္ခဏာများကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဘူတာ B ၏ ပြည်သူ့ သက်သာချောင်ချိ ရေးလုပ်ငန်း များသည် ကျေးလက် ပညာရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ် သော အုပ်စုများ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး အကြောင်းအရာ နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော တန်ဖိုးများကို ဗီဒီယို ဖြင့် ဖော်ပြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Station B သည် ဟောင်ကောင်ရှိ အဆင့်နှစ်ဆင့် စာရင်း လျှောက်လွှာ ကိုအတည်ပြု ခဲ့သည်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကာလအတွင်း ဘူတာ B သည် ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များ ကိုဆက်လက် အာရုံစိုက် ပြီး အတားအဆီး ကင်း သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ များစွာ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Legends Legends S11 Global Finals တွင် ဘူတာ B သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပထမဆုံး အတားအဆီး ကင်း သော တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခန်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၿပိဳင္ပြဲ ကာလအတြင္း အြန္လိုင္း အခန္း ေတြက ပရိသတ္ ၆ သန္း နီးပါးကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။